Adobe Photoshop Elemen 14 Download (MAIMAIMPOANA)
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Adobe Photoshop Element 14 Download
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2021-10-13, Malagasy Blog
Raha te hampiasa ny fahaiza-manao rehetra ao amin'ny Photoshop Elemen ianao ary manao azy ara-dalàna, tsy mila mametraka Rano avy amin'ny Photoshop Elements na keygens, tadiavo ny fomba azo antoka hampidinana fampidinana Adobe Photoshop Elements 14.
Seho an-trano mahasoa. Photoshop Elemen dia programa mahasoa ny mpampiasa amin'ny fanovana sary. Tsy ho sarotra ny mahita ireo fitaovana ilaina rehetra ary manomboka manitsy sary. Ankehitriny, azonao atao ny manafatra tifitra ao anaty tsindry iray ary hiasa miaraka amin'ireo safidinao Auto Creation. Ny Organizer, Photo ary Video Editor (Premiere Elemen) dia eo ihany koa. Azo atao ny miala eo ambany mba hahafahanao mijery ireo fiasa rehetra. Hita eo amin'ny tapany ambony amin'ny efijery izy io. Raha mila mandinika fampianarana an-tserasera ianao dia tadiavo amin'ny alàlan'ny boaty fikarohana.
Excellent mpikarakara. Ny mpikarakara ao amin'ny Elemen 14 dia handamina ny tranombokin'ny sarin'ny mpampiasa, hanasokajiny ireo sary ao anaty vondrona toa ny Toerana, Hetsika ary olona amin'ny alàlan'ny maodely manan-tsaina. Raha ampitahaina amin'ny Element 13, nihatsara ireo vondrona rehetra ireo. Ny endrika iray misongadina kokoa dia ny fanekena ny tarehy. Nandritra ny fitsapana, ny mpikarakara dia nahalala ny endrika tarehimarika mariazy marobe ary nanao izany tamin'ny dingana avo lenta kokoa noho ilay tamin'ny kinova E Element teo aloha.
Quick fanovana. Ny mpanonta sary ao amin'ny Adobe Elements 14 dia mizara ho fomba telo: Quick, Guided and Expert. Ankoatr'izay, misy eLive izay manome torolàlana an-tserasera isan-karazany ambony. Ireo fomba telo ireo dia kendrena amin'ny ambaratonga fahaiza-manao samihafa. Ny maody Quick dia manome ny menus fototra indrindra, ny fanovana, ny fanitsiana tonal mahazatra ary ny vokatra izay ampiharina ao anaty tsindry iray.
Smart Mitady endri-javatra. Adobe Photoshop Elemen 14 nanampy "Smart Looks" amin'ny safidiny vokany manampy 50 eo ho eo. Ny "Smart Looks" dia maka effets dimy avy amin'ny tranomboky iray mihoatra ny 2500, amin'ny alàlan'ny famakafakana sary eo am-pelatanana.
Jereo ny fomba hahazoana Photoshop Elemen maimaim-poana.
Fijerena sary nohatsaraina. Ankehitriny, amin'ny alàlan'ny fandefasana fotsiny ny kursor amin'ny iray amin'ireo safidy naroso, ny mpampiasa dia afaka mahita avy hatrany ny fiovan'ny sary aorian'ny fampiharana ireo fanitsiana. Raha mampihatra ny hetsika dia tsindrio fotsiny ilay kisary.
Fikirana fanampiny. Ao amin'ny Elemen 14, azo atao ny mamorona karatra paositra, kalandrie, sary an-tsary, fampisehoana an-tsary, valopy sy marika fanontana, mamorona rakipeo sary anao manokana, mandefa ny sary amin'ny tambajotra sosialy (fifanakalozana), sns. dia hanamora ny asa ho an'ireo izay tsy mahatakatra ny sombiny amin'ny famolavolana sy ny mampiavaka ny fanontana.
Fepetra takiana amin'ny rafitra - Windows
OS: Microsoft Windows 7 miaraka amin'ny Service Pack 1, Windows 8 na Windows 10 (ny kinova 32-bit dia hapetraka amin'ny rafitra 32-bit; ny kinova 64-bit dia hapetraka amin'ny rafitra 64-bit)
Disk space: 5GB habaka kapila mafy azo ampiasaina (toerana malalaka fanampiny ilaina mandritra ny fametrahana)
Screen: 1024x768 fampisehoana vahaolana (amin'ny ambaratonga 100%)
CPU: 1.6GHz na processeur haingana kokoa miaraka amin'ny fanohanan'ny SSE2
Fepetra takiana amin'ny rafitra - Mac
OS: Mac OS X v10.9 na v10.10
CPU: 64-bit Intel processeur multicore
Araka ny hitanao, ny Adobe Photoshop Elements 14 dia manana takiana amin'ny rafitra somary ambany. Ka raha tsy manana ny solosaina matanjaka indrindra ianao dia mety hahazo an'ity mpamoaka sary ity.
Raha tianao ny hanana tifitra tsy manam-paharoa ny tifitrao rehefa manitsy azy ireo ao amin'ny Ps Elements, dia raiso ity hetsika hetsika maimaimpoana ity.
rohy ny hetsika Matte maimaimpoana mba hahatonga ny sary, zaza vao teraka, fampakaram-bady ary ny sary ho an'ny mpivady ho malefaka kokoa, hampisy fikitika amam-pitiavana ao anatin'ny segondra vitsy. Ireo fiasa Photoshop ireo dia mampiroborobo ny famirapiratana ary mampiakatra kely ny saturation.
Fonosana Ps Actions maimaim-poana
Sintomy ny Adobe Photoshop Elemen 14